Mapako & mawere Chikamu I: iri kunze kweMinecraft vhidhiyo mutambo | Linux Vakapindwa muropa
Zuva rakange rakamirirwa nevazhinji rasvika. Mushure mekuziva kukura kwe Mapako & Mawere uye kuti yaizopatsanurwa nepakati, ikozvino nguva yasvika kana iwe uine iyo Chikamu ini ndinowanikwa cheMinecraft. Uye inouya nekuwanda kwekuvandudza uye yakatakurwa nezvitsva zvemukati pamwe nemikana.
Zvichida iri ye makuru emahara ekuvandudza yemutambo wevhidhiyo weSweden kubvira payakatangwa. Inounza maMOB matsva, anosanganisira Axolotls, Mbudzi, uye Glow Squid, pamwe nematani ezvivakwa zvitsva zvekuvaka zvinhu zvitsva nekukuchengetedza iwe kwemaawa mazhinji. Uye, hongu, uyu mutambo wevhidhiyo iwe unotoziva iwe kuti uripowo kune Linux (Java).
Kana zvakadaro nhau kubva kuMapako & mawere eMinecraft:
axolotls: Axolotls zvisikwa zveamphibian zvine mavara akasiyana siyana anowanikwa mumvura yepasi. Izvo hazvigone kupingudzwa, asi zvinogona kupihwa chikafu nemabuckets ehove. Vanogona kurarama pavhu rakaoma kwemaminetsi mashoma, mushure maizvozvo vanozotanga kuoma uye kukuvara kusvika vadzoreredza uye vopora zvakare (vanogona kutamba vakafa kwechinguva).
Mbudzi: mbudzi dzinouyawo kuMinecraft. Idzi mhuka dzinogona vatambi vemakondohwe, kusvetuka, kudya gorosi, kupa mukaka, nezvimwe. Ehezve, ivo vanodzivirira kufamba kuburikidza nepoda chando.
Kupenya squid- Anopenya squid zvisikwa zvemumvura zvinoberekera zvakadzika. Parufu, ichaburitsa inki inopenya.
Kana zvakadaro mabhuroko matsva, Unogona kuwana zvinhu zvakaita seingi inopenya, mhangura, hupfu chando, lichen yakajeka, amethiste geode, masumbu eamethisto, masumbu eamethyst mabhureki, girazi rakapetwa, tsvimbo yemheni, spyglass, nezvimwe.
En Mapako & Mawere Chikamu II Dzimwe nhau dzichauya pamberi pekupera kwa2021. Ichave neemaomes matsva, mapako matsva, makomo uye zvimwe zvakawanda. Minecraft mafeni achafara.
Kuti uise uku kuwedzera, vhura yako Minecraft Launcher, ita shuwa kuti iyo launcher yakagadziridzwa kune yazvino vhezheni. Wobva waenda kune Zvivakwa, tini iri padyo neMutambo. Ikoko iwe unogona kuita iyo nyowani yekumisikidza.
Dhawunirodha Minecraft yeLinux (Java vhezheni) - Saiti yepamutemo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Mapako & mawere Chikamu I: ikozvino kunze kweMinecraft vhidhiyo mutambo